Vaovao Fisaonana ... vaovao ratsy kokoa ho an'ny Gazety | Martech Zone
Vaovao Fisaonana… vaovao ratsy kokoa ho an'ny Gazety
Alatsinainy Oktobra 30, 2006 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Raha misy manontany ahy, dia mila milaza amin'izy ireo aho fa mbola malahelo miasa ao amin'ny Gazety Gazety. Ny zava-drehetra avy amin'ny fofon'ny press (nanomboka ny asako tamin'ny famokarana aho) dia namaky ny fe-potoana be sy ny loharano faran'izay kely. Ny olona miasa ao amin'ny Gazety dia olona miavaka fotsiny… orinasa iray ampijalian'ny orinasa miadana sy mamono ny zanany.
Na eo aza ny fe-potoana, ny fatiantoka mivezivezy, ny fanapahana mpiasa, ny fandaminana indray ary ny famarotana ny orinasanao avy eo ambany anao, dia miziriziry hatrany ny vahoaka. Ireo mpanao gazety dia tsy mahalala fomba, mendri-pitokisana ary mazoto amin'ny fanovana fiainana amin'ny tenin'izy ireo. Heveriko fa ny fananana gazety onenan'ilay orinasa ivelan'ny faritry ny gazety dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny indostria. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny vaovao syndicated ka hatramin'ny fahaverezan'ny mpitatitra gazety dia nahatonga azy io ho orinasa tsy miankina amin'ny tena.
Andramo araka izay azon'izy ireo atao, ireo mpitondra eo amin'ny sehatry ny indostria toa tsy afaka mamerina indray ilay fako be volo indray. Indostria inoako fa tsy hahomby mihitsy. Ny fanafainganana ny fahafatesan'izy ireo no takian'izy ireo mitaky tombom-barotra bebe kokoa sy lehibe kokoa - ity dia fangalarana ny fampiasam-bola mety hanampy ny gazety hiaina rahampitso amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny tombontsoa an-tserasera sy isam-paritra.
Maro amin'ireo namako akaiky no mbola ao anaty orinasa ary hitako fa manomboka mitafy azy ireo izany. Ora maro, fandroahana bebe kokoa, sorona amin'ny kalitao ary tsy misy valisoa.
Tsy azoko antoka izay mety hampidirina anaty indostria hampandeha azy. Ny 'fahefana izay' dia tsy hamela ny fifehezana ny orinasa na ny politika nisy azy. Ny olana dia handeha hiaraka amin'ny atody mahafinaritra izy ireo rehefa hidina ny sambony. Ny fiainana voakasik'izany indrindra dia ireo olona very asa sy amintsika, ny olom-pirenena mila mpanao gazety handavaka ny marina.
Raha manana fotoana mety hanakaramana olona iray manana traikefa amin'ny Gazety ianao, na IT, Marketing, mpanao gazety, na elektrisianina aza… tena amporisihiko izy ireo. Gazety Lehilahy sy vehivavy mpanao gazety dia mpiasa mahay, tsy tia tena ary miasa mafy izay tsy handiso fanantenana anao velively. Mampalahelo ny mahita ny indostria manimba tena toa izao.
Ny fahazarana 7 amin'ny fampiharana an-tranonkala 2.0 mahomby
Nahazo Facelift ny tranokala Microsoft Office
31 Okt 2006 amin'ny 12:59 PM
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho.
1 Nov 2006 amin'ny 12:42 maraina
Mandrenesa mihaino !!!